Chess 🥇 Gali oo ciyaar Chess-ka Emulator.Online
Chess: Sida loo ciyaaro talaabo talaabo 🙂
Si aad si bilaash ah uga ciyaarto Chess online, raac talaabooyinkan tilmaamaha talaabada ah:
Tallaabada 1. Fur furaha biraawsarkaaga aadna tagto bogga ciyaarta Emulator.online.
Tallaabada 2. Sida ugu dhakhsaha badan ee aad u gasho websaydhka, ciyaarta ayaa mar hore lagu soo bandhigi doonaa shaashadda. Kaliya waa inaad garaac ciyaarta.
Tallaabada 3. Madashu waxay kuu oggolaaneysaa inaad kala doorato inaad ku ciyaarto robot ama inaad la ciyaarto qof kale oo kula jooga. Karaa "Ku dar ama ka saar codka", dooro"Heerka ciyaarta”Gali sawirka”shaashad buuxda"oo diyaar !.
Tallaabada 4. Hadafkaagu wuxuu noqon doonaa inaad ka tagto boqorka adiga oo aan wax dhaqdhaqaaq ah oo suurtagal ah, adoo had iyo jeer xusuusanaya sharciyada ciyaarta. KU
Tallaabada 5. Kadib markaad dhamaysato ciyaar, guji goobaha si aad markale u ciyaarto.
Sidoo kale eeg Xeerarka Rasmiga ah ee Shataranjiga hadaad rabto inaad ogaato sharciyeynta rasmiga ah ee caalamiga ah ee ciyaartan caanka ah.
Waa maxay Chess?
Chess waa a ciyaarta guddiga madadaalo iyo tartan laba ciyaartoy. Waxaa lagu dhaqmaa loox laba jibbaaran oo loo qaybiyaa 64 god oo laba jibbaaran, midab madoow iyo cadaan. Dhinac waa 16ka qaybood oo cadcad dhinac kalena waa tiro isku mid ah oo gogo 'madow ah.
Ciyaaryahan kasta wuxuu xaq u leeyahay hal talaabo markiiba. Ujeeddada ciyaarta ayaa ah in la hubiyo cidda ka soo horjeedda.
Waa ciyaar u baahan caqli gal iyo istiraatiijiyad macquul ah, kuma lug yeesho curiyaha nasiibka, marka laga reebo sawirada midabada bilowga ciyaarta.
Gudiga Shataranjiga ayaa leh 64 god oo loo qaybiyay 8 tiir (taagan) iyo 8 saf (jiif), mid kasta oo leh 8 jibbaaran. Guryuhu waa mid si mugdi ah oo iftiin ah u socda. Barxadda kowaad ee bidixda bidix ee looxyadu waa inay ahaataa afargeesood madow iyo kan ugu dambeeya ee midigta oo laba jibbaaran cad
Tiir kasta waxaa loo qoondeeyay warqad ka socota A ilaa H, halka safafka loo qoondeeyey lambar ka 1 at 8 . Sidan oo kale, afargeesle kasta waxaa loo qoondeeyay xarafka iyo lambarka u dhigma tiirkiisa iyo safkiisa (a1, b6, f5, iwm). Tani waa nidaamka kala soocida caadiga ah ee tartamada rasmiga ahs.
Ciyaaryahan kasta wuxuu leeyahay Qaybaha 16, sidoo kale loo qaybiyay iftiin iyo mugdi. Qeybaha ayaa ah, sida ay isugu xigaan qiimaha:
Nota: Ciyaartoyda chess qaarkood uma tixgeliyaan pawns inay yihiin qaybo. Qiimaha sheyga ayaa sidoo kale kala duwanaan kara, xitaa waxay kuxirantahay booska cutubka sabuuradda.
Bilowga ciyaarta, qaybaha waxaa loo qaybiyaa sabuuradda sida soo socota: qaybaha cadcad ayaa la dul dhigayaa safka 1aad, ilaaliyo safka gawaarida safka 2, halka qaybaha madow ay yihiin safka 8-aad iyo cagihiisa oo ku yaal 7. Ogaysiis hoose:
Bilowguhu badanaa waxay isku qaldaan booska Boqorka iyo Boqoradda, laakiin si ay ugu fududaato kaliya xusuusnow taas Boqoraddu had iyo jeer waxay ciyaarta kubilaabtaa iyadoo dagan laba jibbaar oo isku midab ah (Boqoradda Cad ee Aqalka Cad, Boqoradda Madoow ee Aqalka Madoow).
Sidaa darteed, boqoradda cad waxay ku fadhidaa laba jibbaar D1, halka boqoradda madow ay degantahay fagaaraha D8. Qaabeynta waxaa loo isticmaalaa in looga hortago in Boqorka la weeraro isla marka uu furmayo, sida dhici laheyd haddii Boqoradda ka soo horjeedda la dhigo isla safka.
Guddigu wuxuu u qaybsan yahay laba baal:
Qeybaha waxaa loogu magac daray garabkiisa. Taawarrada ku jira a1 y a8, tusaale ahaan, iyaga ayaa loo yaqaan Tower-Lady, inta munaaradaha ku jiraan h1 iyo h8, Torre-Rei. Isla sidaas ayaa ku dhacda qaybaha kale, iyo xitaa laalaabka, kuwaas oo loogu magac daray gabalka ay ilaaliyaan. Isweydaarsiga e2 waa boqorka cowska, kuwareega d2, boqoradda cagaha, baaburka f2 waxaa loogu yeeraa boqorka pawns-bishop-ka iyo wiishka c2, boqoradda pawns-bishop, iyo wixii la mid ah.
Chess waa ciyaar duug ah oo, sannadihii ay jirtay oo dhan, waxaa jiray sheekooyin kala duwan oo la xiriira asal ahaan.
Asalka Chess-ka Hindiya
Sheekada ugu horeysa ee aduunka laga sheego waxay ka dhacaysaa Hindiya. Waxaa jirtay magaalo yar oo la yiraahdo Taligana, iyo wiilka keliya ee xoogga leh Rajah ku dhintay dagaal dhiig badani ku daatay.
Rajah wuxuu ku dhacay niyad jab waligiisna ma awoodin inuu ka gudbo luminta wiilkiisa. Dhibaatada weyn waxay ahayd in rajah kaliya uusan u dhiman si tartiib tartiib ah, laakiin sidoo kale wuxuu dayacay boqortooyadiisa. Waxay ahayd waqti uun markii boqortooyadu gebi ahaanba dhacday.
Markuu arkay dhicitaankii boqortooyada, brahmin la yiraahdo Lahur Sessa, hal maalin wuxuu u tegey boqorkii oo u geeyey loox ka kooban 64 jibbaaran, oo madow iyo caddaan ah, marka lagu daro dhowr qaybood oo si daacad ah u matalayay ciidankiisa, lugta, fardooleyda, taangiyada, wadayaasha maroodiga, kuwa ugu weyn iyo Raja laftiisa.
Baadariga ayaa u sheegay rajaha in ciyaarta noocaas ah ay dejin karto ruuxiisa isla markaana ay hubaal tahay inay daweynayso niyad jabka. Xaqiiqdii, waxkastoo Brahman sheegay inay dhaceen, Rajah wuxuu mar kale xukumay boqortooyadiisa, isaga oo dhibaatada ka saaray jidkiisa.
Waxay ahayd wax aan la fahmi karin sida ay wax waliba udhaceen, iyadoo hal guddi ay kujiraan qaybo mas'uul ka ah baabi'inta murugada rajah. Abaal marin ahaan, brahmin waxaa la siiyay fursad uu ku weydiisto waxa uu doonayo. Markii hore, wuu diiday dalab noocan oo kale ah isaga oo u maleeyay inuusan u qalmin dalabkaas, laakiin ku adkaysiga Raja, wuxuu codsaday codsi fudud.
Brahmin waxay si fudud u waydiisatay hadhuudh qamadi ah barxada koowaad ee sabuuradda, laba kii labaad, afar kan saddexaad, siddeedna afaraad iyo wixii la mid ah illaa xayndaabka ugu dambeeya. Rajah waxaa lagu maaweeliyay nacfiga codsiga.
Si kastaba ha noqotee, codsiga is-hoosaysiinta ee Brahmin ma ahayn mid aad u hooseeya. Ka dib markay sameeyeen xisaab kala duwan oo ah inta sarreen ee ay ku siin doonaan, waxay ogaadeen inay ku qaadanayso dhammaan goosashada boqortooyada laba kun oo sano oo cajiib ah si loo fuliyo codsigii wadaadka.
Layaabka maskaxda Brahmin, rajah wuxuu ku casuumay inuu noqdo caaqilka ugu sareeya (nooca wasiirka, lataliyaha rajah) ee boqortooyada, Sessa wayna u dhaaftay deyntiisii ​​weyneyd ee sarreenka.
Xaqiiqdii, waxa brahmin u soo bandhigtay rajaha ma ahayn ciyaar chess, waxay ahayd chaturanga, mid ka mid ah noocyada ugu waaweyn ee ciyaarta casriga ah ee loo yaqaan 'chess'.
Asal ahaan khuraafaadka
Suurtagalnimada kale ee weyn ee ku soo baxda sheekooyin kala duwan oo ku saabsan asalka chess waa taas Ates, Ilaahow Dagaal, waxay abuuri lahayd guddi tijaabiya xeeladiisa dagaal (kuwaas oo aad u xaddidanaa, maadaama Ares aan weligiis lagu aqoon inuu xeelado ku leeyahay dagaalladiisa, wuxuu ahaa mid fudud oo dagaal badan, oo aan weerarin si aan sax ahayn inta badan).
Si kastaba ha noqotee, qayb kasta oo ka mid ah guddiga ayaa matalayay qayb ka mid ah ciidankiisa, waana sidaas, illaa Ares uu wiil ka helay nin dhimanaya, oo uu u sii gudbiyay aasaaska ciyaarta. Wixii intaa ka dambeeyay ciyaarta waxay ku imaan laheyd aqoonta dadka.
Isbedelka Chess ee Taariikhda
Waxaa la og yahay in inta u dhaxaysa 1450 iyo 1850, Shataranjiga wuxuu bilaabay inuu yeesho isbeddelo muuqda oo la xiriira waxa aan maanta ognahay. Waxay ahayd inta lagu gudajiray muddadan in qaybo kaladuwan ay kasbadeen dhaqdhaqaaqyo aan maanta ognahay, dabcan, dhammaan dhaqdhaqaaqyadan iyo qaybaha ka soo jeeda Chaturanga.
Maroodiga (kii ka horreeyay ee hoggaamiyaha kiniisadda casriga ah) wuxuu u dhaqaaqi karaa oo keliya laba boodbood jajab ah. Vizier (tii kahoreysay boqoradda) waa kaliya guri kuyaala sawirka. Dadka lugeynaya ma ay dhaqaajin karin laba jibbaaran markii ugu horeysay ee ay dhaqaaqaan walina qashinku ma uusan jirin. Caruurta kaliya waxaa loo dallacsiin karaa vizier, oo ahaa xubinta ugu liidata, ka dib baaburka, dhaqdhaqaaqooda oo kooban awgood.
Xeerarka chess-ka ee aan ognahay maanta waxay bilaabeen in lagu sameeyo 1475Si fudud uma hubtid halka bilowgan ka dhacay. Taariikhyahannada qaarkood way ku kala duwan yihiin Spain iyo Talyaaniga.
Waxay ahayd inta lagu gudajiray muddadan dadka lugeynayay ay kasbadeen dhaqdhaqaaqa aan maanta naqaan, oo ka kooban u guurista laba jibbaaran socodkoodii ugu horreeyay iyo qaadashada dadka kale ee lugeynaya dhaaf .
Waqtigaas, dhaqdhaqaaqyada cusub ee kiniisadda iyo boqoradda sidoo kale waa la qeexay oo, tan ka sii muhiimsan, boqoraddu waxay noqotay qaybta ugu muhiimsan ciyaarta, iyada oo ah kan keliya ee awood u leh inuu u dhaqaaqo meel kasta oo uu horay u socdo ama gadaal u noqdo inta fagaarayaasha ay rabto
Dhaqdhaqaaqa qaybaha kale, oo ay weheliyaan xeerarka intiisa kale ee ku dul wareegaya dhammaan shaxda, ayaa si rasmi ah wax looga beddelay bartamihii qarniga. XIX, iyo xeerarkan ayaa wali taagan maanta.
Kuwa u ciyaara chess-ka sida hiwaayadda, ama kuwa isboortiga ciyaaraya, Ciyaaraha chess-ka waxaa had iyo jeer lagu ciyaaraa laba ciyaartoy oo ku wada jira hal loox.
Si kastaba ha noqotee, cayaarahaan, cayaaraha had iyo jeer uma dhacaan qaabkan, iyo waxaa jira qaabab ka badan intaad qiyaasi karto jaleecada hore. Laga bilaabo mudada ciyaarta, taas oo ku kala duwanaan karta daqiiqado yar ilaa saacado ama xitaa maalmo lagu dhawaaqi karo, mararka qaarkood iyadoo aan la dilin labada ciyaaryahanba.
Ciyaaraha ay ciyaaraan xirfadlayaalku had iyo jeer waxay adeegsadaan saacado jaangooya waqtiga ciyaaryahan kasta. Xaaladaha qaarkood ciyaartoy wuxuu la ciyaari karaa wax ka badan hal qof oo ka soo horjeeda sabuuradaha kala duwan. Miisaska had iyo jeer ma ahan laba jibbaaran iyo waxaa jira qaabab chess ah oo leh ilaa 36 gogo '. Waxaad ku ciyaari kartaa chess adigoon arkin guddiga!
Hadda waxaan arki doonaa hababka chess kala duwan iyo fursadaha badan ee ciyaarta looga dhigi karo mid xiiso badan oo dhib badan.
Ciyaarta Shataranjiga Fasalka
Waa kan hab chess dhaqameed, taas oo ciyaartoydu ay fool ka fool ugu kulmaan guddiga hortiisa.
Waa qaabka ay ciyaartoydu u adeegsadaan kombiyuutarada ku xiran internetka ama shabakad maxalli ah, iyadoo la raacayo isla xeerarkii chess dhaqameed.
Waa kala duwanaanshaha chess-dhaqameedka oo ay ku jiraan a 15 daqiiqo xadka ugu badan ee ciyaartoy kasta. Qaabkan, ciyaartoy xirfadlayaal ah uma baahna inay qoraan dalabkooda.
Ciyaar Chess isku mar ah
Ciyaar chess isku mar ah, ciyaaryahanka chess wuxuu la ciyaarayaa in ka badan hal qof oo ka soo horjeeda sabuuradaha kala duwan.
Qaabkaan ciyaaryahan ma sameeyo eeg guddigaAma adoo adeegsanaya iibinta ama xitaa qol gooni ah. Tartankii indhoolaha Waxay ku saleysan tahay xusuusta ciyaaryahanka chess-ka, oo ay tahay inuu qurxiyo booska guddiga oo sameeyo falanqeyntiisa maskaxeed.
El warqad ama warqad chess, sida loo yaqaanna, waa a qaabka chess ee meel fog laga barto, iyadoo la isugu dirayo. Markii hore, ciyaartoyda chess-ka waxay dalabkooda ugu direen waraaqo ama kaararka boostada, laakiin waqti iyo horumarin teknoloji maalmahan waxaa suurtagal ah in la adeegsado emaylka, taasoo si weyn u yareyneysa waqtiga sugitaanka ee jawaabta.
Ogeysiiska qaabkani waa ka duwan yahay ogeysiisyada chess-ga soo jireenka ah, badanaa maxaa yeelay waxaa ku dhaqma dad ka yimid adduunka oo dhan, kuna hadla luqado kala duwan. Chess Epistolary wuxuu leeyahay mid u gaar ah xiriirka caalamiga ah(ICCF).
Shuruucda Rasmiga ah ee Shataranjiga
XEERARKA AASAASIGA AH EE CIYAARTA
1. Ujeeddooyinka ciyaarta chess-ka.
1.1 Ciyaarta chess-ka waxaa wada ciyaara laba qof oo iska soo horjeeda oo kolba dhinac u kala wareegaya sabuurad laba jibbaaran oo loo yaqaan 'guddiga chess'. Isaga ciyaaryahan leh cad cad wuxuu bilaabayaa ciyaarta. Ciyaaryahan ayaa la sheegay inuu 'leexan karo inuu ciyaaro' markii la dhaqaaqo koox ka soo horjeedda. (Eeg Qodobka 6.7)
1.2 Ciyaaryahan kasta hadafkiisu waa gelinta boqorka ka soo horjeedka 'in la weeraro' si uusan qofka ka soo horjeedaa uusan u dhaqaaqin sharci ahaan. Ciyaaryahankii hadafkan gaadha ayaa la sheegay inuu dilay boqorkii ka soo horjeeday isla markaana uu ciyaarta ku guuleystay. Lama oggola inaad ka tagto ama aad boqorkaaga boqortooyadiisa weerar ku qaaddo, ama inaad qabsato boqorka kaa soo horjeeda. Qofka ka soo horjeedaa ee boqorkiisu hubiyey ciyaarta ayaa laga badiyay.
1.3 Ciyaarta ayaa ah xirid hadday ku dhalato jago meesha labada ciyaaryahan midkoodna fursad uma lihi inuu iska hubiyo.
2. Meesha ugu horeysa ee gogo 'on sabuuradda.
2.1 Chessboard-ka wuxuu ka kooban yahay shabakad ka kooban 8 × 8 oo leh afar jibbaaran beddelkeed iftiin siman (laba jibbaarane 'cadaan') iyo mugdi (fagaarayaasha' 'madow').
Guddiga ayaa la dhex dhigaa ciyaartoyda sida ay laba jibbaaran geeska midig ee ciyaaryahan kasta ha noqdo mid cad.
2.2 Bilowga ciyaarta, ciyaartoy wuxuu leeyahay 16 qaybood oo midab khafiif ah leh (qaybaha "cad"); tan kale waxay leedahay 16 qaybood oo midab madow ah (jajabka madow “):
Qeybahaani waa sida soo socota:
Boqor cad, badanaa lagu muujiyaa astaanta.
Marwo cad, ayaa lagu muujiyey astaanta.
Laba munaaradood oo cad, ayaa lagu muujiyey astaanta.
Laba kiniisad cad, oo lagu muujiyey astaanta.
Laba faras oo cad, oo lagu muujiyey astaanta.
Sideed cad oo cadaan ah, oo lagu muujiyey astaanta.
Boqor madow, oo lagu muujiyey astaanta.
Marwo madow, ayaa lagu muujiyey astaanta.
Laba kiniisad madow, oo lagu muujiyey astaanta.
Laba faras madow, oo lagu muujiyey astaanta.
2.3 Mawqifka bilowga ah ee qaybaha sabuuradda waa sida soo socota:
2.4 Sideeda guri ee sida tooska ah loo soo agaasimay waxaa loo yaqaan 'tiirar'. Sideeda guri ee si toos ah loo abaabulay waxaa loo yaqaan 'saf'. Khadka toosan ee laba jibbaaran oo isku midab ah, kana wareegaya gees ka mid ah sabuuradda una gudbayo dhinaca ku xigta, waxaa loo yaqaan 'xagal'
3. Dhaqdhaqaaqa qaybaha.
3.1 Lama ogola in gabal loo wareejiyo laba jibbaaran oo horeba ugu jiray qayb kale oo isku midab ah. Haddii gabal loo wareejiyo laba jibbaaran oo ay horay u joogeen qayb ka soo horjeedda, kan dambe ayaa la qabtaa oo laga saaraa loox ka mid ah isla tallaabadaas. Gabal ayaa la sheegay inuu weerarayo qayb ka soo horjeedda haddii ay qabsan karto fagaarahaas, iyadoo la raacayo Qodobbada 3.2 ilaa
Gabal waxaa loo tixgeliyaa inuu weerarayo laba jibbaaran, xitaa haddii fagaarahaas laga hor istaago inuu u wareego fagaarahaan, maxaa yeelay waxay taasi ka tagaysaa ama dhigaysaa boqorkooda gaarka ah weerar.
3.2 Bishop-ka ayaa u dhaqaaqi kara goob kasta oo ay weheliso xagasha.
3.3 Baadariga ayaa u guuri kara meel kasta oo ay la socdaan feylka ama safka uu ku yaal.
3.4 Boqoraddu waxay u dhaqaaqi kartaa goob kasta oo ay weheliso feylka, safka, ama xagalka ay ku taal.
3.5 Markii la sameynayo dhaqdhaqaaqyadan, hoggaamiyaha kiniisaddu, rook ama boqoraddu kama boodo googo' kasta oo jidka ku jira.
3.6 Farasku wuxuu u dhaqaaqi karaa mid ka mid ah fagaaraha ugu dhow midka uu fuulo. Xusuusnow in labajibaaraha uu geesigu u dhaqaaqi karo uusan ku jirin isla safka, safka, ama xagalka.
3.7 ku. Caanbaxa waxaa loo dhaqaajin karaa laba jibbaaran, isla markaaba hortiisa, isla feylka, kaas oo aan deganeyn, ama
3.7.1 Markay dhaqaaqdo ugu horreysa, baaburka waa la dhaqaajin karaa sida ku xusan 3.7.a; haddii kale, waxaad u guuri kartaa laba guri isla safka, haddii ay labaduba deggan yihiin, ama
3.7.2 Cawdadu waxay u dhaqaaqi kartaa laba jibbaarane oo ay degto qayb ka soo horjeeda, taas oo si jaantus ah horteeda ugu jirta, fayl ku dhow, qabanaya gabalkaas.
3.7.3 Caano weerartay laba jibbaaran oo ay isweydaarsadeen cowska ka soo horjeedka oo hadda laba horumarsan oo tallaabo ah oo hal tallaabo ah oo ka socota laba jibbaaraneedkeedii hore ayaa qabsan kara bajaajtan iska soo horjeedda sidii ay u dhaqaaqday oo keliya hal dhinac.
Qabsashadan waxaa lagu samayn karaa oo keliya dhaqaaqa isla markaaba ka dib horumarka la soo sheegay waxaana loo yaqaan 'en passant' soket.
3.7.4. Markay cariishku gaadho darajada ugu fog marka loo eego halka ay ka bilaabmayso, waa in loogu beddelaa qayb ka mid ah isla dhaqdhaqaaqyada isla barxadda boqorad, rook, hoggaamiyaha kiniisadda, ama halyeey isku midab ah sida baaburka. Xulashada ciyaaryahanka kuma koobna jajabyada horay loogu qabtay ciyaarta.
Isweydaarsiga cuudka ee gabal kale waxaa loo yaqaan 'dhiirrigelin' ficilka qaybta cusubna waa mid deg deg ah.
3.8 Waxaa jira laba siyaabood oo kala duwan oo loo dhaqaajiyo boqorka: boqorka loo wareejiyo guri kasta oo deris la ah oo aan weerarin mid ama ka badan qaybaha ka soo horjeeda.
Sidoo kale waa la soo mari karaa lulaya. Tani waa tallaabo lala sameeyay boqorka iyo mid ka mid ah rooks, oo isku midab ah safka hore ee ciyaaryahanka, oo loo tixgeliyo inuu yahay hal boqor oo dhaqaaq ah oo loo fuliyay sidan soo socota: boqorka waxaa laga wareejiyay gurigiisii ​​asalka ahaa laba guri oo ku wajahan munaaradda gurigiisa asalka ah, ka dib munaaraddii waxaa loo wareejinayaa gurigii uu boqorka ka soo gudbay.
(1) Xuquuqda in la soo saaro:
haddii boqorka mar hore la dhaqaajiyey, ama
leh munaarad durba la dhaqaaqay
(2) Kaabista si ku meelgaar ah looma oggola:
haddii fagaaraha uu boqorku haysto, ama fagaaraha uu isagu dhex marayo, ama fagaaraha uu qabsan doono, ay weeraraan mid ama in ka badan oo ka mid ah cadowgooda gogo ', ama
haddii ay jiraan wax u dhexeeya boqorka iyo dhagaxa rooga oo lagu dhex tuuro.
3.9 Boqorka ayaa la sheegay in la xukumayo hadii ay soo weeraraan hal ama dhowr qaybood oo ka soo horjeeda, xitaa haddii qaybahaasi ay ku dhegan yihiin, taas oo ah, waxaa laga hor istaagayaa inay ka baxaan gurigaas, sababtoo ah way ka tagi lahaayeen ama boqorkooda ayay hoos imaan lahaayeen.
Ma jiro gabal u dhaqaaqi kara qaab kashifaya ama uga tagaya boqorkooda maamulkiisa.
4. Ficil dhaqaajinta qaybaha.
4.1 Dhaqdhaqaaq kasta waa in lagu sameeyaa hal gacan.
4.2 Ilaa iyo inta uu ujeedkiisa ka sii sheegayo (tusaale ahaan, isagoo leh waxaan helayaa "j'adoube" ama "Waan la qabsanayaa"), ciyaaryahanka leh markiisa inuu ciyaaro wuxuu heli karaa hal ama in ka badan oo xabbo ah guryahiisa.
4.3 Marka laga reebo sida ku xusan Qodobka 4.2, haddii ciyaaryahanka uu toosayo inuu taabto
ula kac ah mid ama in kabadan oo gogo 'oo isaga u gaar ah sabuuradda, waa inuu ku ciyaaraa qaybta ugu horeysa ee la taabtay ee la dhaqaajin karo, ama
mid ama in ka badan oo ka mid ah xubnihii ka soo horjeeday, waa inuu soo qabtaa qaybta hore ee la taabtay, ee la qaban karo, ama
Hal xabbo oo midab kasta ah, waa inuu ku qabsadaa qaybta ka soo horjeedda qaybtiisa ama, haddii ay taasi sharci-darro tahay, dhaqaajiso ama qabato qaybta ugu horreysa ee la taabto ee lagu ciyaari karo ama lagu qaban karo. Haddii aysan caddayn qaybtii hore loo ciyaaray, qayb ka mid ah ciyaartoyga qaybtiisa waa in loo tixgeliyaa in la ciyaaray ka hor kii ka soo horjeeday.
4.4 Haddii ciyaaryahanka uu leexdo:
si ula kac ah u taabo boqorkaaga oo rookku waa inuu ku tuuraa garabkan haddii dhaqaaqu uu sharci yahay.
si ula kac ah u taabto rook ka dibna boqorka, looma ogola inuu ku dul istaago garabkan talaabadan waana in xaalada lagu hagaajiyaa Qodobka 4.3.a
Ujeedada tuurista, waxay taabaneysaa boqorka ama boqorka iyo rook isku mar, laakiin tuurista dhinacan waa sharci darro, ciyaaryahanka waa inuu sameeyaa talaabo kale oo sharci ah boqorkooda (oo ay ku jiri karto tuurista dhinaca kale) Haddii boqorka uusan haysan talaabo sharci ah, ciyaaryahanka waa u xor inuu sameeyo talaabo kale oo sharci ah.
waxay dhiirrigelisaa baaburka, xulashada gabalku waa la dhammeeyaa oo keliya marka gabalku taabto square square.
Haddii cutubyada taabtay midkoodna aan la dhaqaajin karin ama la qaban karin, ciyaaryahanka ayaa sameyn kara wax kasta oo sharci ah.
Marka gabal ku dhaco guri, ku dhaqaaqista sharci ama qeyb ka mid ah dhaqaaqo sharci, looma wareejin karo guri kale markii loo guuro. Dhaqdhaqaaqa waxaa loo arkaa inuu dhameystiran yahay:
marka laga hadlayo qabashada, markii cutubka la qabtay laga saaro sabuuradda, ciyaartoyguna, ka dib markuu qaybtiisa gaarka ah dhigo fagaaraha cusub, wuxuu sii daayay qaybtii laga qabtay gacantiisa;
marka laga hadlayo qashin-tuurista, marka ciyaartoygu sii daayo dhagaxa gacantiisa oo ku yaal fagaaraha uu hore boqorka uga tallaabay Markuu ciyaartoygu sii daayo boqorka gacantiisa, tallaabadaas lama dhaqangelinayo, laakiin laacibku xaq uma lahan inuu sameeyo dhaqdhaqaaq kasta oo aan ka ahayn qalcadda garabkaas, haddii ay taasi sharci tahay;
marka laga hadlayo kor u qaadista baaburka, markii cagtii laga saaray sabuuradda isla markaana ciyaaryahanka gacantiisa uu sii daayay gabalkii cusbaa kadib markii uu dul dhigay fagaaraha dallacsiinta. Haddii ciyaaryahanka uu horay u sii daayay cowska gaaray sanduuqa dallacsiinta ee gacantiisa, tallaabadaas weli lama sameyn, laakiin ciyaaryahanka xaq uma lahan inuu ciyaaro
lugeynaya guri kale.
Qiyaasta waxaa loo arkaa inay sharci tahay marka la buuxiyo dhammaan shuruudaha ku habboon ee qodobka 3aad.Haddii guuritaanku uusan sharci ahayn, tallaabo kale oo sharci ah waa in la sameeyaa sida ku xusan qodobka 4.5
4.7 Ciyaaryahanku wuxuu luminayaa xaqa uu u leeyahay inuu ka cawdo ku xadgudubka qodobka 4 ee qofka ka soo horjeeda, laga bilaabo marka uu si ula kac ah u taabto gabal.
5. Dhammaadka bixitaanka
5.1 Ciyaarta waxaa ku guuleysta ciyaaryahanka xukuma boqorka ka soo horjeeda. Tani waxay isla markiiba soo afjaraysa ciyaarta, waa haddii tallaabada soo saarta booska hubinta ay sharci tahay.
Haddii ciyaarta uu guuleysto ciyaaryahanka ay ka soo horjeedaan ku dhawaaqaan inuu isagu / iyadu baxayo. Tani waxay isla markiiba soo afjartay ciyaarta.
5.2 Ciyaarta ayaa la isku dhejiyaa marka ciyaaryahanka markiisa qaadanaya uusan wax talaabo ah oo sharci ah u qaadin isla markaana boqorka uu xukumo uusan jirin. Cayaarta ayaa la sheegay inay ku dhammaatay iyadoo boqorka uu “qaraqmay”. Tani waxay isla markiiba dhammeyneysaa ciyaarta illaa inta tallaabada soo saartay booska istaaggu ay sharci tahay.
Ciyaarta ayaa la soo saaray markii boos ka muuqdo taas oo labada ciyaaryahan midkoodna uusan hubin karin boqorka ka soo horjeeda iyada oo loo marayo tallaabooyin taxane ah oo sharci ah. Ciyaarta ayaa la sheegay inay ku dhammaatay "xaalad dhimatay." Tani waxay isla markiiba dhammeyneysaa ciyaarta illaa inta tallaabada soo saareysa booska ay sharci tahay (eeg Qodobka 9.6)
Cayaartu waxay ku dhacdaa heshiis ay wada gaareen ciyaartoydu inta ay ciyaartu socoto. Tani waxay isla markiiba soo afjartay ciyaarta. (Eeg Qodobka 9.1)
Ciyaarta waa la soo jiidan karaa haddii meel isku mid ah ay ka muuqato ama ay ka muuqato sabuuradda ugu yaraan saddex jeer. (Eeg Qodobka 9.2)
Cayaartu waxay noqon kartaa barbaro haddii ciyaartooydu ay sameeyeen 50-kii dhaqaaq ee ugu dambeeyay oo xiriir ah iyaga oo aan dhaqaajin wax baalal ah isla markaana aan wax qabsan. (Eeg Qodobka 9.3)
6. Saacadda Chess
6.1. 'Chess clock' waxaa loola jeedaa saacad leh laba waqti oo kormeerayaal ah, oo ku xiran si mid kood oo iyaga ka mid ahi markiiba u shaqeyn karo.
'Saacadda' ee Sharciyada Shataranjiga macnaheedu waa mid ka mid ah labada kormeerayaasha waqtiga. Saacad waliba waxay leedahay falaar.
'Fallaarta hoos u dhaca' macnaheedu waa dhammaadka waqtiga loo qoondeeyey ciyaaryahan.
6.2. Markaad isticmaaleyso saacad jees ah, ciyaaryahan walba waa inuu sameeyaa ugu yaraan dhaqdhaqaaq ama dhammaan dhaqdhaqaaqyada waqti go'an iyo / ama waqti dheeri ah oo dheeraad ah ayaa loo qoondeyn karaa dhaqdhaqaaq kasta ka dib. Waxaas oo dhan waa in horay loogu sii caddeeyaa.
Waqtiga uu ciyaartoy kaydsaday hal xilli ayaa lagu darayaa waqtiga mudada xigta, marka laga reebo qaabka "waqtiga dib u dhaca".
Qaabka "dib u dhaca waqtiga“, Labada ciyaaryahanba waxaa lasiiyay waqti muhiim ah”. Ciyaaryahan kasta wuxuu sidoo kale helaa "waqti dheeri ah oo go'an" dhaqdhaqaaq kasta. Xisaabinta waqtiga ugu weyn waxay bilaabmaysaa uun kadib markii waqtiga loo qabtay uu dhaafay. Ilaa iyo inta ciyaartoygu saacaddiisa joojinayo ka hor inta "waqtiga go'an" aanu dhammaan, "waqtiga ugu muhiimsan" isma beddelayo, iyadoon loo eegin saamiga "waqtiga go'an" ee la isticmaalay.
6.3 Isla marka falaartu dhacdo, shuruudaha Qodobka 6.2 waa in la hubiyaa.
6.4 Kahor bilowga ciyaarta, garsooraha ayay u taal inuu go’aamiyo halka saacadda la dhigayo.
6.5 Saacada ciyaaryahanka ee leh cad cad waa inuu bilaabmaa waqtiga loo cayimay bilowga ciyaarta.
6.6 Ciyaaryahan kasta oo gaara guddiga ka dib bilowga kalfadhiga ayaa waayi doona ciyaarta. Sidaa darteed, muddada dib u dhaca waa daqiiqado eber ah. Xeerarka tartanka ayaa si kale u qeexi kara.
Haddii qawaaniinta tartanku sheegaan maqnaansho kala duwan, waxa soo socda ayaa khuseeya:
Haddii ciyaartoyda midkoodna uusan imaanin waqtiga bilowga, ciyaaryahanka leh cad cad waa inuu lumaa waqtiga oo dhan ka hor imaanshihiisa, haddii aysan qeexin xeerarka tartanka ama garsooruhu uusan si kale u go'aansan.
6.7 Inta ciyaarta lagu jiro, ciyaartoy kasta, ka dib markii uu u dhaqaaqo guddiga, waa inuu joojiyaa saacaddiisa oo uu bilaabaa saacadda qofka ka soo horjeedaa Ciyaaryahan waa in marwalba loo ogolaado inuu dhaqaajiyo biinanka saacadiisa. Guuristaada looma tixgelinayo inay dhammaystiran tahay illaa aad ka qabato, mooyee guuritaanku ciyaarta kama dhammaan (eeg Qodobbada 5.1.a, 5.2.a, 5.2.b, 5.2.c iyo 9.6).
Waqtiga udhaxeeya dhaqaaqista sabuuradda iyo joojinta saacada lafteeda, iyo sidoo kale bilaabida saacada ka soo horjeedka, waxaa loo arkaa inay qayb ka tahay waqtiga loo qoondeeyay ciyaaryahanka.
Ciyaaryahanku waa inuu saacadiisa ku joojiyaa isla gacantii uu ku dhaqaaqay. Gacanta ku haynta biinanka saacadda ama ku dul dul wareegsan waa mamnuuc.
Ciyaartoydu waa inay si sax ah u maareeyaan saacadda chess-ka. Waa mamnuuc in loo isticmaalo xoog xad-dhaaf ah, lagu hayo ama lagu rido. Isticmaalka aan habooneyn ee saacada ayaa la ciqaabi doonaa iyadoo la raacayo Qodobka 13.4.
Haddii ciyaartoygu aanu saacadda adeegsan karin, waa inuu keenaa kaaliye hawshan fuliya, oo ay taageerayaan garsooraha. Saacadaadu waa inuu garsooruhu si sax ah ugu dejiyaa si cadaalad ah.
Falaartu waxaa loo arkaa inay dhacday markii garsooraha uu arkay xaqiiqda ama markii mid ka mid ah ciyaartoydu uu si sax ah u dalbado arrintaas.
Marka laga reebo marka mid ka mid ah qodobbada ku jira Qodobbada 5.1.a, 5.1.b, 5.2.a, 5.2.b, 5.2.c ay khusayso mooyee, ciyaaryahanka lumiya tirada dhaq-dhaqaaqa ee loo qoondeeyay waqtiga ayaa luminaya ciyaarta. Si kastaba ha noqotee, ciyaarta ayaa la isku dhejiyaa marka la gaaro meel uusan ka soo horjeedin ka hubin karin boqorka ka soo horjeeda iyada oo loo marayo tallaabooyin sharci oo macquul ah.
The. Tilmaam kasta oo ay bixiyaan saacadaha ayaa loo tixgelin doonaa in la dhammaystiro maqnaanshaha cillad muuqata. Saacad kasta oo chess ah oo cilad muuqata leh waa in la beddelaa. Garsooruhu waa inuu bedelaa saacadda oo uu adeegsadaa caqli wanaag marka uu dejinayo waqtiyada lagu soo bandhigayo gacmaha saacadda kaasoo beddeli doona midka cilladda leh.
HAA. Haddii inta lagu guda jiro ciyaarta la ogaado in qaabeynta hal ama labadaba ay khaldaneyd, ciyaaryahanka ama garsooraha waa inuu isla markiiba joojiyaa saacadaha. Garsooruhu waa inuu saxaa waqtiga iyo miiska toogashada. Garsooruhu waa inuu adeegsadaa xukunkiisa ugu fiican si uu u go'aamiyo nidaamka saxda ah.
6.8 Haddii labada fallaadhood hoos u dhacaan oo aan suurtagal ahayn in la ogaado midka ugu horreeya ee dhacay:
ciyaarta ayaa sii socon doonta haddii tani dhacdo xilli kasta oo ciyaarta ah, marka laga reebo muddadii ugu dambeysay.
ciyaarta ayaa la soo saaray haddii ay dhacdo inta lagu jiro xilliga ciyaarta, marka dhammaan dhaqdhaqaaqyada haray ay tahay in la dhammaystiro.
6.9 Haddii ciyaar loo baahan yahay in la joojiyo, garsooruhu waa inuu joojiyaa saacadaha.
Ciyaaryahanku wuxuu joojin karaa oo keliya saacadaha si uu u raadsado caawinta garsooraha, tusaale ahaan, marka dallacaad la sameeyo oo aan loo helin gabalkii loo baahnaa.
Garsooruhu waa inuu go'aansadaa goorta ciyaarta dib loo bilaabi karo xaalad kasta.
Haddii ciyaaryahanka uu joojiyo saacadaha si uu caawimaad uga raadsado garsooraha, garsooraha waa inuu go’aamiyaa haddii ciyaaryahanka uu haysto sabab macquul ah oo uu sidaas ku sameeyo. Haddii ay iska cadahay in aysan jirin sabab macquul ah oo saacadaha lagu joojiyo, ciyaaryahanka waxaa lagu ciqaabayaa sida ku cad qodobka 13.4
6.10 Haddii wax isdabamarin dhacdo iyo / ama qaybaha waa in lagu beddelaa boos hore, garsooruhu waa inuu adeegsadaa xukunkiisa ugu fiican si uu u go'aamiyo waqtiyada laga heli karo saacadaha. Garsooruhu sidoo kale waa inuu, haddii loo baahdo, tirada dhaqdhaqaaqyada gadaal u hagaajiya.
6.11 Qolka ciyaarta: shaashadaha, kormeerayaasha ama looxyada darbiga waa la ogol yahay, oo muujinaya booska hadda ee guddiga, dhaqdhaqaaqa iyo tirada dhaqdhaqaaqa la sameeyay, iyo saacadaha sidoo kale muujinaya tirada dhaqdhaqaaqa. Si kastaba ha noqotee, ciyaaryahanka ma sameyn karo sheegashooyin ku saleysan kaliya macluumaadka lagu soo bandhigay qaabkan.
7. Cilad la’aan
7.1 Haddii inta lagu guda jiro ciyaarta la ogaado in booska hore ee qaybaha uu khaldanaa, ciyaarta waa la joojinayaa waxaana la ciyaarayaa ciyaar cusub.
Haddii, inta lagu guda jiro ciyaarta, ay u muuqato in guddiga loo meeleeyay si ka soo horjeedda qodobbada Qodobka 2.1, ciyaarta ayaa sii socota, laakiin booskii horay loo ciyaaray waa in loo wareejiyaa guddiga si sax ah loo dhigay.
7.2 Haddii ciyaar ay ku bilaabatay midabada la rogay, waa inay sii socotaa garsooraha mooyee inuu si kale u go’aansado mooyee.
Haddii ciyaaryahanka uu dhaqaajiyo hal ama dhowr qaybood, waa inuu soo celiyaa booska saxda ah waqtigiisa. Haddii loo baahdo, ciyaaryahanka ama qofka ka soo horjeedaa wuxuu joojin karaa saacadda oo wuxuu wici karaa garsooraha. Garsooruhu wuxuu ciqaabi karaa ciyaaryahanka dhaqaajiyay qaybaha.
7.3 Haddii, inta lagu guda jiro ciyaarta, la ogaado in tallaabo sharci darro ah la dhammaystiray, oo ay ku jiraan ku guuldareysiga dhaqanka ee kor u qaadista baaburka ama qabashada boqorka ka soo horjeeda, jagada isla markiiba ka horreysa sharci darrada waa in dib loo dhiso. Haddii booskaas aan dib loo dhisi karin, ciyaarta waa inay ka socotaa booska ugu dambeeya ee la aqoonsan karo, kahor intaanay cilladdu dhicin. Saacadaha waa in loo dejiyaa si waafaqsan Qodobka 6.13. Qodobbada 4.3 iyo 4.6 waxay khuseeyaan guuritaanka meel ka baxsan dhaqaaq sharci darro ah. Cayaartu waa inay ka socotaa booska la soo celiyey.
Haddii ka dib markii aad qaadday ficillada lagu sharraxay Qodobka 7.4.a, labada tallaabo ee ugu horreysa ee sharci-darrada ah ee ciyaartoy, garsooruhu waa inuu siiyaa kan ka soo horjeeda laba daqiiqo oo dheeri ah tusaale kasta; tallaabada saddexaad ee sharci-darrada ah ee isla ciyaartoyga, garsooruhu waa inuu caddeeyaa ciyaarta laga badiyay ciyaaryahankaas.
Si kastaba ha noqotee, ciyaarta ayaa la isku dhejiyaa marka la gaaro meel uusan ka soo horjeedin ka hubin karin boqorka ka soo horjeeda iyada oo loo marayo tallaabooyin sharci oo macquul ah.
7.4 Haddii, inta lagu guda jiro ciyaarta, qaybaha la ogaaday inay ka guureen guryahooda, booska isla markiiba ka hor inta aan sharci-darrada ahayn waa in dib loo soo celiyaa. Haddii booska isla markiiba ka horreeya sharci-darrada aan la go'aamin karin, ciyaarta ayaa ka sii socon doonta booska ugu dambeeya ee la aqoonsan karo ka hor cilladda. Saacadaha waa in loo dejiyaa si waafaqsan Qodobka 6.13. Cayaartu waa inay ka socotaa booska la soo celiyey.
8. Fasiraadda dalabyada
8.1 Inta ciyaarta lagu guda jiro, ciyaaryahan walba waxaa looga baahan yahay inuu wax ku qoro 'warqad-xaashi' loo qoro ee loogu talagalay tartanka, farriinta aljebrada (Eeg Lifaaqa C), dhaqdhaqaaqiisa iyo kan ka soo horjeedaba, si sax ah, ugu dhaqaaq dhaqdhaqaaqa, qaabka cad oo macquul ah sida ugu macquulsan. Waa mamnuuc in la qoro isu soo baxa ka hor inta aan la saarin sabuuradda, marka laga reebo marka isku soo laaban la sheegto sida ku cad Qodobbada 9.2, 9.3, ama ciyaar dib loo dhigo sida ku cad Qodobka 1.a ee Tilmaamaha Bixitaanka Dib Loo Dhigay.
Ciyaaryahanku wuu ka jawaabi karaa dhaqaaqa ka soo horjeeda kahor inta uusan qorin, haddii ay rabaan.
Waa inaad qortaa dalabkaagii hore kahor intaadan sameysan mid kale.
Labada ciyaartooyba waa inay galaan soojeedinta isku aadka warqadda (eeg Lifaaqa C.13).
Haddii ciyaaryahanka uusan awoodin inuu gool dhaliyo, caawiye, oo uu siin karo ciyaaryahanka oo uu aqbalo garsooraha, ayaa sameyn doona dhaq dhaqaaqyada. Saacadiisa waa inuu garsooruhu si cadaalad ah u dejiyaa.
8.2 Inta ciyaarta lagu jiro, xaashiyaha shaashadu waa inay had iyo jeer u muuqdaan garsooraha.
8.3 Xaashida waraaqaha waxaa iska leh qabanqaabiyaasha munaasabada.
8.4 Haddii ciyaaryahanka uu haysto wax ka yar shan daqiiqo saacaddiisa wakhti kasta inta lagu jiro xilliga ciyaarta oo uusan helin waqti dheeri ah oo ah 30 ilbiriqsi ama ka badan dhaqdhaqaaq kasta, inta ka harsan muddadaas waajib kuma aha inuu buuxiyo shuruudaha ciyaarta. Qaybta 8.1. Isla marka ka dib mid ka mid ah 'fallaadhaha' ay soo dhacdo, ciyaartoygu waa inuu cusbooneysiiyaa xaashidiisa shaqo ka hor inta uusan u dulqaadan gabal sabuuradda.
8.5 Haddii labada xiddig midkoodna looga baahnayn inuu gool dhaliyo, sida ku cad Qodobka 8.4, garsooraha ama kaaliyaha waa inay isku dayaan inay markhaati ka noqdaan oo ay duubaan dhaqdhaqaaqa. Xaaladdan oo kale, isla marka falaartu dhacdo, garsooruhu waa inuu joojiyaa saacadaha. Markaa labada ciyaaryahan waa inay cusbooneysiiyaan xaashidooda gooldhalinta, iyagoo adeegsanaya garsooraha ama kan ka soo horjeeda.
Haddii hal ciyaartoy looga baahan yahay inuu wax duubo, sida ku cad qodobka 8.4, isla marka fallaaraha midkood hoos u dhacaan, waa inuu gebi ahaanba cusbooneysiiyaa xaashidiisa shaqo ka hor inta aanu u dul qaadin gabal sabuuradda ah. Ilaa iyo inta ay tahay waqtigaaga inaad dhaqaaqdo, ciyaaryahanka wuxuu isticmaali karaa xaashiyaha ka soo horjeedka, laakiin waa inuu soo celiyaa ka hor inta uusan dhaqaaqin.
Haddii aan la helin warqad dhammaystiran, ciyaartoydu waa inay dib ugu dhisaan ciyaarta guddi kale, iyadoo ay kormeerayaan garsooraha ama kaaliyaha. Kahor bilowga dib-u-dhiska ciyaarta, garsooruhu wuxuu xusi doonaa booska ciyaarta ee hadda, waqtiyada iyo tirada dhaqdhaqaaqyada la sameeyay, haddii macluumaadkan la heli karo.
Haddii xaashiyaha waraaqaha aysan cusbooneysiin oo muujiyaan in ciyaaryahan uu dhaafay waqtiga loo cayimay, tallaabada xigta waa in loo tixgeliyaa tii ugu horreysay ee waqtiga soo socda, haddii aysan jirin caddeyn muujineysa in dhaq dhaqaaqyo dheeri ah la sameeyay.
Ciyaarta ka dib, labada ciyaaryahan waa inay wada saxiixaan labada warqad shaqo, oo tilmaamaya natiijada ciyaarta. Xitaa haddii uu khaldan yahay, natiijadan ayaa taagnaan doonta, illaa garsooraha haddii kale uu go’aansado mooyee.
9. Ciyaaraha lagu xirey
9.1 Sharciyada tartanka ayaa qeexi kara in ciyaartoydu aysan ogolaan karin inay xiraan wax ka yar dhaqdhaqaaqyo gaar ah ama si uun, iyadoon ogolaansho laga helin garsooraha.
9.2 Haddii qawaaniinta tartanku u oggolaadaan isku-raac heshiis ah, waxa soo socda ayaa khuseeya:
Ciyaaryahanka doonaya inuu soo jeediyo tuur waa inuu sameeyaa ka dib markii uu ku dhaqaaqo dhaqdhaqaaqa sabuuradda, ka hor inta uusan saacadda joojin oo uusan bilaabin saacadda ka soo horjeedka. Bixinta waqti kasta oo kale inta lagu jiro ciyaarta ayaa sii socon doonta, laakiin Qodobka 12.6 waa in la ilaaliyaa. Shuruudaha laguma dari karo soo-jeedinta. Labada xaaladoodba, dalabka lama noqon karo oo wuu ansaxayaa ilaa qofka ka soo horjeedaa uu ka aqbalo, afkiisa ku diido, ku diido isagoo taabanaya gabal ulajeedkiisu yahay inuu dhaqaajiyo ama qabsado, ama haddii ciyaartu si kale ku dhammaato.
Qiyaasta isku aadka waa in ay ku xusaan labada ciyaartooy xaashiyahooda oo ay astaan ​​u tahay (Eeg Lifaaqa C13).
Sheegashada isku xidhka ku saleysan Qodobada 9.2, 9.3 ama 10.2 ayaa loo tixgelin doonaa inay tahay soo bandhig isku mid ah
9.2 Ciyaarta ayaa la soo saaray, ka dib cabasho sax ah oo ka timid ciyaaryahanka leh leexashada inuu ciyaaro, marka uu isku boos joogo, ugu yaraan seddex jeer (qasab maahan soo noqnoqoshada dhaqdhaqaaqa)
inuu muuqdo, haddii aad marka hore kuqorto tallaabadaada xaashida waraaqda oo aad u sheegto garsooraha inaad doonayso inaad ku dhaqaaqdo
ayaa haatan soo muuqday ciyaaryahanka sheeganaya in kulanka uu leeyahay markiisa inuu ciyaaro.
Jagooyinka sida (a) iyo (b) loo tixgeliyaa inay isku mid yihiin, haddii isla cayaaryahanku leex leexdo, qaybaha isla nooca iyo midabku waxay ku fadhiyaan isla laba jibbaarane, iyo fursadaha dhaqdhaqaaqa ee dhammaan qaybaha labada ciyaartoy isku mid.
Jagooyinku iskumid ma aha haddii baabbe la qaban lahaa 'en passant' aan hadda sidan oo kale lagu qaban karin. Marka boqor (ama rook) lagu qasbo inuu guuro, waxay waayi doontaa xuquuqdiisa tuurista, haddii ay jirto, kaliya marka la dhaqaajiyo ka dib.
9.3. Cayaartu waa isku xiran tahay, cabasho sax ah oo ka timid ciyaaryahanka leh leexashada ciyaarta, haddii:
wuxuu ku diiwaan gelinayaa dhaq dhaqaaqiisa warqadiisa wuxuuna cadeeyay garsooraha inuu doonayo inuu fuliyo talaabadiisa, taas oo keeni doonta 50 dhaqaaq oo loo sameeyo ciyaaryahan kasta iyadoon wax dhaq dhaqaaq ah la sameynin isla markaana aan la qaban, ama
Dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyay ee 50 ee isku xigta waxaa sameeyay labada ciyaartoy, iyada oo aan wax dhaqdhaqaaq ah la samayn ama la qabsan.
Haddii ciyaaryahanka uu taabto gabal sida ku xusan Qodobka 4.3 asaga oo aan sheeganeyn xarig, wuxuu luminayaa xaquuqda sheegashada, sida ku cad qodobada 9.2 iyo 9.3, marka uu socdo.
Haddii ciyaaryahanka uu sheegto barbardhac, sida ku cad Qodobbada 9.2 iyo 9.3, wuu joojin karaa labada saacadood. (Eeg Qodobka 6.12.b) Kama noqon kartid sheegashada
Haddii sheegashada la go'aamiyey inay sax tahay, ciyaarta markiiba waa la soo dhaweynayaa
Haddii sheegashada la go'aamiyay inay khalad tahay, garsooraha waa inuu ku daraa seddex daqiiqo waqtiga ka haray soo horjeedka. Markaa ciyaarta waa inay sii socotaa. Haddii sheegashada lagu saleeyay dalab qorshaysan, dalabkan waa in loo sameeyaa si waafaqsan qodobbada Qodobka 4.
9.4 Ciyaarta waxaa laqeexaa marka meel la gaaro halka hubiye uusan ku dhici karin sababo la xiriira taxane kasta oo macquul ah oo dhaq dhaqaaq sharci ah. Tani waxay isla markiiba dhammeyneysaa ciyaarta illaa inta tallaabada soo saareysa booskani ay sharci tahay.
10. Dhameystir dhameystiran
10.1 'Dhamaadka xawaaraha leh' waa wajiga ciyaarta taas oo dhamaan (haray) dhaqaaqa waa in lagu sameeyaa waqti go'an oo xadidan.
10.2 Haddii ciyaaryahanka, oo markiisa la ciyaaro, ay ka yar tahay laba daqiiqo saacaddiisa, wuxuu dalban karaa xarig ka hor inta aan falaadhiisu dhicin. Waa inuu waco garsooraha wuuna joojin karaa saacadaha (Eeg Qodobka 6.12.b).
Haddii garsooruhu aqbalo in ka soo horjeedka uusan sameynaynin dadaal uu ku guuleysto ciyaarta, qaab caadi ah, ama in ka soo horjeedka uusan ku guuleysan karin qaab caadi ah, markaa waa inuu ku dhawaaqo isku aadka. Haddii kale, waa inaad dib u dhigtaa go'aankaaga ama aad diiddo cabashada. Haddii garsooruhu dib u dhigo go'aankiisa, kan ka soo horjeedaa waxaa loo ogolaan karaa labo daqiiqo oo waqti dheeri ah ciyaarta waa inay sii socotaa haddii ay suurogal tahay garsooraha. Garsooruhu waa inuu ku dhawaaqaa natiijada ugu dambeysa ciyaarta ama sida ugu dhaqsaha badan ee suurtogalka ah ka dib fallaarta soo degtay. Waa inaad ku dhawaaqdaa isku aadka haddii aad aqbasho in booska ugu dambeeya aan loogu guuleysan karin qaab caadi ah, ama in qofka ka soo horjeedaa uusan sameynin isku dayo ku filan oo uu ciyaarta ugu guuleysto qaab caadi ah.
Haddii garsooruhu diido sheegashada, kan ka soo horjeedaa waa inuu haystaa laba daqiiqo oo waqti dheeri ah.
Go'aanka garqaadaha ayaa noqon doona kama dambays (racfaan la'aan) (a), (b), (c).
11. Haddii aan horay loo shaacin, haddii kale, ciyaaryahanka ku guuleysta ciyaartooda, ama ku guuleysta WO, wuxuu helayaa dhibic (1), ciyaaryahanka laga badiyaa kulankooda ama laga adkaado WO wuxuu helaa (0) pt iyo ciyaaryahanka xir ciyaartaada waxay heleysaa dhibcaha nus dhibic (½).
12. Anshaxa ciyaartoyda.
12. 1 Ciyaartoyda ma awoodi doonaan inay qaadaan wax talaabo ah oo sumcad xumo ku keenaya ciyaarta shataranjiga.
2 Ciyaartoydu kama bixi karaan “deegaanka lagu ciyaaro” ogolaansho la’aan garsooraha. Jawiga cayaartu wuxuu ka kooban yahay qolka ciyaarta, musqulaha, aagga cuntada fudud, aagga sigaarka caba iyo meelaha kale ee garsooruhu u qoondeeyay. Ciyaaryahanka, oo leh markiisa ciyaarta, kama bixi karo hoolka ciyaarta isagoon rukhsad ka haysan garsooraha.
12.2 Inta ay ciyaartu socoto, ciyaartooyda waa laga mamnuucay inay isticmaalaan qoraalada, ilaha macluumaadka ama talo, ama ay ku falanqeeyaan sabuurad kale.
Ogolaansho la'aan garsooraha, ciyaaryahanka waa laga mamnuucay inuu sito taleefanka gacanta ama qaabab kale oo elektaroonik ah oo lagula xiriiro qolka ciyaarta, ilaa gebi ahaanba laga jaro Haddii qalabkan midkood soo saaro buuq, ciyaaryahanka waa inuu lumiyaa ciyaarta. Qofka ka soo horjeedaa waa inuu guuleystaa. Si kastaba ha noqotee, haddii qofka ka soo horjeedaa uusan ku guuleysan karin ciyaarta iyada oo loo marayo tallaabooyin taxane ah oo sharci ah, dhibcahiisa waa in loo tixgeliyaa barbaro.
Sigaar cabidda waxaa loo oggol yahay oo keliya aagga uu go'aamiyo garsooruhu.
Xaashida waraaqaha waa in loo isticmaalaa oo kaliya in lagu qoro dalabyada, saacadaha saacadaha, dalabka isku xirka, diiwaanka la xiriira cabashada, iyo macluumaadka kale ee la xiriira.
Ciyaartoyda dhamaystay ciyaarahooda waa in loo tixgeliyaa daawadayaal.
Waa mamnuuc in lagu mashquuliyo ama lagu carqaladeeyo qofka ka soo horjeeda sinnaba. Tan waxaa ka mid ah cabashooyinka aan macquul ahayn, dalabyada xayeysiis ee aan la soo koobi karin, ama soo bandhigida ilaha buuqa ee aagga lagu ciyaaro.
Ku xad-gudubka qayb kasta oo ka mid ah qodobbada 12.1 illaa 12.6 waxay horseedi doontaa ku-dhaqanka cunaqabateynta lagu sheegay qodobka 13.4.
12.3 Diidmada joogtada ah ee ciyaaryahan u hogaansamayo Shuruucda Shataranjiga waa in lagu ciqaabaa guuldarro ciyaarta. Garsooruhu waa inuu go’aamiyaa natiijada ka soo horjeedka.
Haddii labada ciyaaryahan lagu helo dambi sida ku cad Qodobka 12.8, ciyaarta waxaa lagu dhawaaqi doonaa inay labaduba lumeen.
Xagga fanka. 10.2.d. ama Lifaaqa D, ciyaartoygu rafcaan kama qaadan karo go'aanka garsooraha.
Si kastaba ha noqotee kiis kasta oo kale, ciyaaryahan ayaa rafcaan ka qaadan kara go'aan kasta oo garsoore ah, illaa xeerarka tartanka ay si kale u qeexaan.
13. Doorka garsooraha
13.1 Garsooruhu waa inuu hubiyaa in sharciyada Shataranjiga si adag loo ilaaliyay.
Garsooruhu waa inuu ku shaqeeyaa danta ugu fiican ee tartanka. Waxaad u baahan tahay inaad hubiso inay jirto jawi wanaagsan oo lagu ciyaaro, si ciyaartoyda aysan u qasin. Sidoo kale waa inaad la socotaa habsami u socodka tartanka.
Garsooruhu waa inuu ilaaliyaa ciyaaraha, gaar ahaan marka ay ciyaartooydu waqtiga ku yaalliin, oo ay fuliyaan go’aamada uu gaadhay, isla markaana ay ciqaab ku rido ciyaartoyda markay ku habboon tahay.
13.2 Garsooruhu wuxuu dalban karaa mid ama in ka badan oo ka mid ah ciqaabta soo socota:
Kordhi waqtiga ka haray kan ka soo horjeeda,
yaree waqtiga u haray ciyaaryahanka gefka ku kacaya,
cadee ciyaarta lumay,
yaree dhibcaha uu kasbaday ciyaarta ciyaaryahanka gefka geysanaya,
Kordhi dhibcaha uu kasbaday kulanka koox ka soo horjeedda ugu badnaan suurtagalnimada kulankaas,
Garsooruhu wuxuu siin karaa hal ama labada ciyaartoy waqti dheeri ah haddii ay dhacdo khalkhal dibadeed inta lagu jiro ciyaarta.
Garsooruhu waa inuusan soo dhexgalin ciyaar, marka laga reebo kiisaska ku xusan Shuruucda
Chess. Waa inuusan tilmaamin tirada dhaqdhaqaaqa la sameeyay, marka laga reebo marka la adeegsanayo qodobbada Qodobka 8.5, marka ugu yaraan mid ka mid ah fallaadhihiina ay soo dhaceen. Garsooruhu waa inuu ka waantoobaa inuu ku wargeliyo ciyaaryahanka inuu ciyaaryahanka ka soo horjeedaa uu dhaqaaqay ama uusan ciyaartoygu saacadiisa bilaabin.
The. Daawadayaasha iyo ciyaartooyda cayaaraha kale waa inaysan kuhadlin ama aysan faragalin ciyaarta sinaba. Haddii loo baahdo, garsooruhu wuxuu eryi karaa dambiilayaasha jawiga ciyaarta. Haddii qof u fiirsado wax aan caadi ahayn, waxay u sheegi karaan oo keliya garsooraha.
HAA. Garsooraha mooyee, waa mamnuuc in qof kasta uu ku isticmaalo taleefanka gacanta ama aalad kasta oo isgaadhsiineed goobta iyo aag kasta oo kale oo isku xidhan oo garsooruhu go’aamiyay.
14.1 Xiriirrada xiriirka la leh waxay codsan karaan FIDE inay ka bixiso go'aan rasmi ah arrimaha la xiriira Shuruucda Shataranjiga.
A. Chess dhakhso ah
A1 Ciyaarta 'Chess Quick' waa mid ay tahay in dhammaan dhaqdhaqaaqyada lagu sameeyo waqti cayiman oo loo cayimay ugu yaraan 15 daqiiqo, laakiin in ka yar 60 daqiiqo oo ciyaaryahan kasta ah; ama waqtiga ugu weyn + 60 jeer kordhin kasta waa ugu yaraan 15 daqiiqo, laakiin in ka yar 60 daqiiqo oo ciyaaryahan kasta ah.
A2 Ciyaartoyda looma baahna inay duubaan dhaqdhaqaaqa ciyaarta.
A3 Marka ay jirto kormeer ku filan ciyaarta (tusaale ahaan, hal garsoore ugu badnaan seddex kulan) Xeerarka Tartanka ayaa lagu dabaqayaa.
A4 Marka kormeeriddu aysan ku filneyn, Xeerarka Tartanka ayaa lagu dabaqayaa, marka laga reebo marka lagu xukumo Shuruucda soo socota ee Chess Degdega ah:
Marka ciyaaryahan kasta uu sameeyo seddex dhaqdhaqaaq, wax cabasho ah lama sameyn karo oo ku saabsan meeleynta khaldan ee qaybaha, meeleynta guddiga, ama dejinta saacadda. Marka laga hadlayo isbadal ku yimaada booska u dhexeeya boqorka iyo boqoradda, lama ogola in lala tuuro boqorkaas.
Garsooruhu waa inuu soo faragaliyaa iyadoo la raacayo qodobbada Qod. 4 (Sharciga dhaqaaqa googo'yada), kaliya haddii loo baahdo hal ama labada ciyaartoy.
Tallaabo sharci darro ah waa la dhammaystiray isla marka ay saacadda ka soo horjeedka bilaabataa. Kooxda ka soo horjeedaa waxay xaq u leedahay inay sheegato in ciyaaryahanka uu dhameystiray talaabo sharci darro ah, waa haddii uusan sameyn dhaqaaqiisa. Kaliya cabashada noocaas ah waa inuu garsooruhu soo dhexgalo. Si kastaba ha noqotee, haddii labada boqorba ay gacanta ku hayaan ama kor u qaadista baaburka aan la dhammaystirin, garsooruhu waa inuu soo farageliyaa, haddii ay suurtagal tahay.
1. Falaartu waxaa loo arkaa inay dhacday markii mid ka mid ah ciyaartoygu uu sameeyo sheegasho sax ah. Garsooruhu waa inuu iska ilaaliyaa inuu tilmaamo fallaadh dhacaysa, laakiin wuu soo faragelin karaa haddii labada fallaadhoodaba dhacaan.
A5 Si aad u sheegato guul waqti, sheegashada waa inuu joojiyaa labada saacadood oo uu ogeysiiyaa garsooraha.
Si sheegashadu u guuleysato, ka dib marka saacadaha ay istaagaan, fallaadha codsadaha waa inuu 'kor u taagnaadaa' iyo kan ka soo horjeeda ee fallaadhiisu hoos u dhacdo ka dib marka saacadaha la joojiyo.
A6 Haddii labada fallaadhba la siidaayo sida ku qeexan (1) iyo (2), garsooruhu waa inuu ku dhawaaqo ciyaarta inay barbaro tahay.
B1 Ciyaarta 'hillaaca' waa mid ay tahay in dhammaan dhaqdhaqaaqyada lagu sameeyo waqti cayiman oo loo cayimay oo ka yar 15 daqiiqo ciyaaryahan kasta; ama waqtiga ugu weyn + 60 jeer wixii kordhitaan ah wax kayar 15 daqiiqo.
B2 Marka ay jirto kormeer ku filan oo ciyaarta ah (hal garsoore kulan kasta), Xeerarka Tartanka iyo qodobbada Qodobka A2 ayaa khuseeya.
B3 Marka kormeerku aanu ku filnayn, waxa soo socda waa in lagu dabaqo.
Ciyaaraha waxaa xukumi doona Shuruucda Degdega ah ee Chess sida lagu sheegay Lifaaqa A, marka laga reebo marka lagu xukumo Shuruucda soo socota ee Danab.
Qodobbada 10.2 iyo A4c ma khuseeyaan.
Tallaabo sharci darro ah waa la dhammaystiray isla marka ay saacadda ka soo horjeedka bilaabataa. Ka hor inta uusan dhaqaaqin, qofka ka soo horjeedaa wuxuu xaq u leeyahay inuu sheegto guul. Si kastaba ha noqotee, ciyaaryahanka wuxuu xaq u leeyahay inuu dalbado barbardhac ka hor inta uusan dhaqaaqin, haddii kooxda ka soo horjeedaa aysan xakamayn karin sababo la xiriira dhowr talaabo sharci oo macquul ah. Ka dib marka qofka ka soo horjeedaa uu dhammeeyo dhaqaajintiisa, tallaabo sharci darro ah lama sixi karo haddii uusan jirin heshiis guud oo aan dhex dhexaadin garsoore ah.
Sharaxaadda nidaamka aljabrada
C1 Sharaxaaddan, "gabal" macnaheedu waa gabal kasta, marka laga reebo baaburka.
C2 Qayb kasta waxaa lagu muujiyaa xarafka ugu weyn, ee magaceeda. Tusaale: R = king, D = queen, T = rook, B = bishop, C = knight. (Xaaladda faraska, si loogu sahlo, u isticmaal N.)
C3 Xarafka ugu horeeya ee magaca googooyada, ciyaartoygu wuxuu xor u yahay inuu isticmaalo xarafka ugu horeeya ee magaca maadaama caadiyan looga isticmaalo wadankiisa. Tusaale: F = fou (Faransiis bishop), L = loper (Dutch for bishop). Jariidadaha daabacan, isticmaalka dharka ayaa lagula talinayaa.
Caruurta C4 Iyaga lama tusin warqaddooda koowaad, laakiin waxaa lagu aqoonsan yahay maqnaanshahooda. Tusaale: e5, d4, a5.
C5 Sideeda tiir (bidix ilaa midig ee cad iyo midig bidix madow) waxaa lagu muujiyaa xarfaha yaryar, a, b, c, d, e, f, g, iyo h, siday u kala horreeyaan.
C6 Sideeda saf (min hoose ilaa sare ciyaaryahanka cad iyo min kor ilaa hoose ee ciyaaryahanka madow) waxaa loo kala xigaa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, iyo 8. Sidaa awgeed, booska bilowga, qaybaha cad waxaa la dhigayaa safka koowaad iyo kan labaad; Qeybaha madow waxaa la dhigaa safafka siddeedaad iyo toddobaad.
C7 Iyada oo ay sabab u tahay xeerarka kor ku xusan, mid kasta oo ka mid ah 64-da sanduuq ayaa si aan kala sooc lahayn loogu muujiyey isku darka hal xaraf lambar
C8 Dhaqdhaqaaq kasta oo gabal ah waxaa lagu muujiyaa a) xarafka ugu horreeya ee magaca gabalka su'aasha laga qabo iyo b) goobta imaanshaha. Ma jiro wax dhejis ah oo u dhexeeya a) iyo b).
Tusaalooyinka: Be5, Nf3, Rd1.
Marka la eego dadka lugeynaya, kaliya meesha la imanayo ayaa la tilmaamayaa. Tusaalooyinka: e5, d4, a5.
C9 Markii gabal laqabto, x ayaa la dhex gelinayaa inta udhaxeysa (a) xarafka hore iyo magaca gabalka la sheegayo iyo b) goobta imaatinka. Tusaalooyinka: Bxe5, Nxf3, Rxd1. Markay cagtu qabato, safka bilowga waa in la muujiyaa, ka dibna x, ugu dambayntii laba jibbaaraha imaatinka. Tusaalooyinka: dxe5, gxf3, axb5. Marka laga hadlayo qabashada 'en passant', barxada bartilmaameedka ayaa la bixiyaa, oo tilmaamaysa halka ay ugudambeyntii ugu dambaysay ku degtay, iyo xarfaha 'ep' ayaa lagu daray qoraalka. Tusaale: exd6 ep
C10 Haddii laba taayil oo isku mid ah ay aadi karaan isla halbeegga, leyliga dhaqaaqa ayaa lagu tilmaamayaa sida soo socota:
Haddii labada qaybood ay isla saf yihiin: a) xarafka ugu horreeya ee magaca gabalka, b) sadarka meesha laga baxayo, iyo c) meesha la imanayo.
Haddii labada qaybood ay isla safka ku wada jiraan: a) xarafka ugu horreeya ee magaca gabalka, b) safka meesha la tagayo, iyo c) meesha la imanayo
Haddii qaybaha ay ku jiraan tiirar iyo safaf kala duwan, habka 1) ayaa laga door bidaa. Xaaladda qabashada, 'x' waa lagu dari karaa inta u dhexeysa b) iyo c).
Waxaa jira laba gantaal, laba jibbaaranaha g1 iyo e1, midkoodna wuxuu u wareegayaa f3: Ngf3 ama Nef3, sida kiisku noqon karo.
Waxaa jira laba nooc, oo kuyaala laba jibbaaranaha g5 iyo g1, midkoodna wuxuu u wareegayaa f3 square: C5f3 ama C1f3, sida xaalku noqon karo.
Waxaa jira laba gaashaaman, guriga h2 iyo d4, midkoodna wuxuu u guuraa guri f3: Nf3 ama Ndf3, sida kiisku noqon karo.
Haddii qabsashadu ku dhacdo qaabka f3, tusaalooyinka kor ku xusan waxaa lagu beddelay iyadoo lagu darayo 'x':
1) Haddii laba wadiiqo ay qabsan karaan isla gabalka kan ka soo horjeeda, cagaha dhaqaaqay waxaa lagu muujiyey a) xarafka sadarka hore, b) 'x', c) barxadda ugu dambeysa Tusaale: haddii ay jiraan cadaan cad oo ku yaal laba jibbaarane c4 iyo e4 iyo gabal madow oo ku yaal d5, ogeysiiska ku saabsan dhaqaaqa Caddaani waa cxd5 ama exd5, sida ugu habboon.
Xaaladda kor u qaadista cowska, dhaqaaqa cagaha ayaa la muujiyaa, oo isla markaaba la raacaa xarafka ugu horreeya ee gabalka cusub. Tusaalooyinka: d8D, f8C, b1B, g1T.
Soo bandhigida kulanka waa in lagu calaamadeeyaa (=)
Soo gaabinta aasaasiga ah:
0-0 = caaryo leh munaarad h1 ama munaarad h8 (dhagax yar)
0-0-0 = caaryo leh munaarad a1 ama munaarad a8
(dhagax weyn) x = qabsan
+ = hubi ++ ama # = hubiye
ep = qabashada "dhaafitaanka"
Khasab maahan in lagu qoro jeeg, jeegga iyo qabashada xaashiyaha faafiya.
Dhamaad dardar leh iyadoo garsoore uusan joogin goobta ciyaarta
Xaaladaha marka ay ciyaarayaan ay xukumayaan qodobka 10-aad, laacibku wuxuu codsan karaa bareejo marka uu haysto wax ka yar laba daqiiqo saacaddiisa iyo ka hor inta aysan falaadhiisu dhicin. Tani waxay soo afjartay ciyaarta. Waxaad dalban kartaa adigoo ku saleynaya:
in qofka kaa soo horjeeda uusan ku guuleysan karin qaab caadi ah, iyo / ama
in qofka kaa soo horjeeda uusan sameynaynin dadaal uu ugu guuleysto qaab caadi ah.
Qiyaasta (a), ciyaaryahanka waa inuu duubaa booska ugu dambeeya kan ka soo horjeedana wuu hubiyaa.
Qiyaasta (b), ciyaartoygu waa inuu ku qoraa booska ugu dambeeya xaashiyaha la cusbooneysiiyay.
Qofka ka soo horjeedaa waa inuu hubiyaa booska ugu dambeeya iyo warqadda shaqada.
Ashtakada waa in loo gudbiyaa garqaade, oo go aankiisu noqon doono kama dambaysta.
Shuruucda ciyaarta ee dadka indhoolayaasha ah iyo dadka indha la'aanta ah.
Agaasimayaasha tartanka E1 waa inay lahaadaan awood ay kula qabsadaan sharciyada hoos ku xusan iyadoo loo eegayo xaaladaha deegaanka.
Tartanka chess-ka tartamaya ee u dhexeeya ciyaartoyda aragga leh iyo ciyaartoyda aragga naafada ka ah (si rasmi ah indhoole), labada ciyaaryahanba waxaa laga yaabaa inuu u baahdo adeegsiga laba guddi, ciyaartooyda indha indheynta ku leh guddiga caadiga ah, iyo ciyaaryahanka aragga naafada ka ah ee leh guddi si gaar ah loo dhisay. Shaxda sida gaarka ah loo dhisay waa inay buuxisaa shuruudaha soo socda:
cabirka ugu yar 20 x 20 cm;
guryaha madow ayaa xoogaa nafis ah;
dalool yar oo guri kasta ku yaal;
Qayb kastaa waa inay lahaataa biin yar oo si fiican ugu habboon godka guryaha;
Qaybaha moodeelka "Staunton", qaybaha madow ayaa si gaar ah loo calaamadeeyay.
E2 Xeerarka soo socda waa inay xukumaan ciyaarta:
1. Bixinta waa in si cad loo shaaciyo, laguna celceliyo kan ka soo horjeeda laguna diro sabuuraddiisa. Markaad dhiirrigelinayso pawn, ciyaartoygu waa inuu ku dhawaaqo qaybta la doortay. Si loo caddeeyo ku dhawaaqista sida ugu macquulsan, waxaa lagu taliyay in la isticmaalo
Magacyada soo socda halkii laga heli lahaa xarfaha aljebrada ee u dhigma
Safafka caddaanka illaa madow waa inay lahaadaan lambarrada Jarmal:
8 acht (siddeed)
Daarta ayaa lagu dhawaaqay "Lange Rochade”(Grande Roque oo ku qoran luuqada Jarmalka) iyo“ Kurze Rochade ”(Daabacaad yar oo ku saabsan luuqada Jarmalka).
Qeybaha waxay adeegsadaan magacyada luqadda Jarmalka:
"Koenig ”(King),“ Dame ”(Boqoradda),“ Turm ”(Rook),“ Laeufer ”(Bishop),“ Springer ”(Faras) iyo“ Bauer ”(Pawn).
Looxyada aragga naafada ka ah, qaybta ayaa loo tixgeliyaa in la taabtay markii laga saaray daloolka hagaajinta.
Bixinta waxaa loo tixgeliyaa in la fuliyo marka:
marka la soo qabanayo, haddii gabalkii la qabtay laga saaray sabuuradda ciyaartoygeeda ay tahay inuu ciyaaro;
qayb ayaa lagu meeleeyay dalool hagaajin kale;
Dalabkii ayaa lagu dhawaaqay.
Kaliya markaa ayaa saacadda ka soo horjeedka bilaabmi doontaa.
Sida ugu dhakhsaha badan ee dhibcaha 2 iyo 3 ee kor ku xusan la isku daro, xeerarka caadiga ah ayaa u ansaxaya ciyaaryahanka faaliyaha
4. Isticmaalka saacad si gaar ah loo dhisay oo loogu talagalay ciyaaryahanka aragga naafada ka ah waa la ogol yahay. Saacadda sidoo kale waa inay lahaataa astaamaha soo socda:
garaac lagu hagaajiyay gacmo la xoojiyay, oo shantii daqiiqaba mar lagu calaamadeeyo dhibic iyo 15kii daqiiqo ee kasta oo leh laba dhibic;
Falaadh taabasho si fudud loo dareemi karo. Feejignaan gaar ah waa in laga yeesho in fallaadhihu si hagaagsan u hagaagaan si uu ciyaartoygu u dareemo gacmaha shantii daqiiqo ee ugu dambaysay saacadda buuxda.
Ciyaaryahanka aragga naafada ka ah waa inuu ciyaarta ku duubtaa Braille, ama ku qoraa dhaqdhaqaaqa gacmaha, ama ku duubtaa cajalad magnet ah.
Khaladaad kasta oo ku jira ku dhawaaqista guurista waa in isla markiiba la saxaa ka hor inta uusan saacadda ka soo horjeedka bilaabmin.
Haddii inta lagu guda jiro ciyaarta ay jagooyin kala duwan ka soo muuqdaan labada loox, waa in lagu saxo iyadoo la kaashanayo garsooraha isla markaana lala tashado waraaqaha shaqo ee labada ciyaartoy. Haddii labada warqad shaqo ay isbarbar dhigaan, ciyaaryahanka si dhaqsi leh u qoray talaabada, laakiin si qaldan u fuliyay, waa inuu saxaa booskooda si uu ula mid noqdo dhaqaaqa ku qoran warqadaha shaqada.
Haddii ay dhacdo kala duwanaansho labada warqad shaqo, booska waa in dib loogu noqdaa meeshii ay labada waraaqood iswaafajin oo garsooruhu uu saacadaha dib u dajin doono hadba haddii loo baahdo.
Ciyaaryahanka aragga naafada ka ah wuxuu xaq u leeyahay inuu isticmaalo kaaliye fuliya mid ama dhammaan waajibaadka soo socda:
Samee dhaqaaq kasta oo ciyaartoy ah sabuuradda ka soo horjeedda;
Ku dhawaaq dhaqdhaqaaqa labada ciyaartoy;
Ku duub dhaqdhaqaaqyada warqadda shaqada ee aragga naafada ah oo bilow saacadda ka soo horjeedka (adoo tixgelinaya sharciga 3.c);
u sheeg ciyaaryahanka aragga naafada ka ah, kaliya codsigiisa, tirada dhaqdhaqaaqyada la sameeyay iyo waqtiga ay qaateen labada ciyaaryahan;
sheegasho guul haddii saacada ka soo horjeedka ay dhacday oo u sheeg garsooraha markii ciyaaryahanka qiyaasaya uu taabtay mid ka mid ah gooshiisa.
Samee habraacyada lagama maarmaanka u ah cayrinta bixitaanka.
10. Haddii ciyaaryahanka aragga naafada ka ah uusan adeegsan kaaliye, ciyaaryahanka aragtida badan wuxuu qof ka codsan karaa inuu mas'uuliyad iska saaro gudashada waajibaadka ku xusan qodobbada 9.a iyo 9.b.
Sharciyada Chess 960
F1 Kahor ciyaarta Chess960, booska bilowga waxaa loo dhigaa si aan kala sooc lahayn, iyadoo ku xiran xeerar gaar ah. Intaas ka dib, ciyaarta waxaa loo ciyaaraa si la mid ah chess classical. Gaar ahaan, jajabyada iyo pawns-ku waxay leeyihiin dhaqdhaqaaqooda caadiga ah, himilada ciyaartoy walbana waa inuu hubiyo boqorka ka soo horjeeda.
Shuruudaha laga bilaabo booska
Booska laga bilaabayo Chess960 waa inuu raacaa qawaaniinta qaarkood. The pawns white waa in lagu dhejiyaa safka labaad sida shaxda caadiga ah. Dhammaan inta hartay ee cadcad ayaa si aan kala sooc lahayn loo dhigaa safka koowaad, laakiin leh xaddidaadaha soo socda:
Boqorka waxaa la dhigay meel u dhexeysa labada munaaradood, iyo
Bishobada waxaa la dhigaa guryo midabyo iska soo horjeed ah leh, iyo
Qeybaha madow waxaa la dhigaa si sax ah oo ka soo horjeeda qaybaha cad.
Jagada hore waxaa la soo saari karaa ka hor bixitaanka, ama barnaamijka kombiyuutarka ama iyadoo la adeegsanayo xog, lacag ama kaarar, iwm.
Xeerarka dejinta Chess960
Chess960 wuxuu u oggolaanayaa ciyaartoy kasta inuu tuuro hal jeer ciyaar kasta, boqorka wadajirka ah iyo rook dhaqdhaqaaqa hal tallaabo. Si kastaba ha noqotee, tarjumaadaha qaar ee ciyaarta caadiga ah ee chess ayaa lagama maarmaan u ah qashinka, sababtoo ah xeerarka dhaqameedku waxay u maleynayaan inay bilaabayaan boosaska boqorka iyo rook oo inta badan aan lagu dabaqi karin 960 chess.
Sida loo bilaabo
Chess960, waxay kuxirantahay booska boqorka iyo rook intaan la shurin, qashin-jabinta waxaa lagu sameeyaa iyadoo la adeegsanayo mid ka mid ah afar habab:
Dhaqdhaqaaqa laba-geesoodka ah: Dhaqdhaqaaq lala yeesho boqorka oo ay ku xigto u dhaqaaq la rook.
Dareen ku-beddelasho: ku beddelashada jagada boqorka iyo tan rook.
Qalbidhagax oo leh hal boqor oo dhaqaaq ah: Samee kaliya hal boqor oo dhaqaaq ah.
Tuur hal dhaqaaq oo munaarad ah: Samee hal dhaqaaq oo keliya.
Markii lagu tuuro loox jireed qof ka soo horjeedda aadanaha, waxaa lagula talinayaa in boqorka uu ka baxo dusha sare ee guddiga meel u dhow meeshii ugu dambeysay, rookku wuxuu ka dhaqaaqi doonaa booskiisii ​​hore una wareegi doonaa booskiisa ugu dambeeya, ugu dambeyntiina boqorka ayaa la dhigi doonaa. Hoygaaga.
Dajinta ka dib, jagooyinka ugu dambeeya ee rook iyo boqorka waxay la mid noqon doonaan sida chess classical.
Marka ka dib dhismeedka weyn (oo loo yaqaan 0-0-0 loona yaqaan 'cast-side castling' ee shaxanka asalka ah, boqorka wuxuu ku jiraa guriga c (c1 oo cadaan ah iyo c8 madow) rookkuna waa guriga dhexdiisa d (d1 caddaan iyo d8 madow) Ka dib markii lagu tuuray laba jibbaaran g
(waxaa lagu xusay 0-0 oo loo yaqaan 'cast-side castling in orthoss chess'), boqorka wuxuu kuyaala fagaaraha g (g1 cadaan iyo g8 madow) rookkuna wuxuu kujiraa fagaaraha f (f1 cadaan iyo f8 ilaa madow).
1. Si looga fogaado wixii qalad ah, waxaa lagugula talinayaa inaad dhahdo "Waan furayaa" kahor intaanad bixin dalabka.
2. Meelaha laga bilaabayo qaarkood, boqorka ama rook (laakiin labadaba maahan) ma dhaqaaqo inta daaqadda lagu jiro.
3, jagooyinka qaarkood ee bilowga ah, daaqadda waxaa loo samayn karaa si dhicis ah sida tallaabada ugu horreysa.
Dhammaan afargeesarayaasha u dhexeeya barxadaha bilawga iyo dhammaadka ee boqorka (oo ay ku jiraan barxadda dhammaadka), iyo dhammaan godadka u dhexeeya barxadaha rookyada bilowga iyo dhammaadka (oo ay ku jiraan barxadda dhammaadka), waa inay banaanaadaan, marka laga reebo barxadaha boqorka iyo .
Meelaha qaarkood ee laga bilaabayo, fagaarayaasha qaar, oo ay ahayd inay ku banaanaadaan shax dhaqameedka, ayaa laga yaabaa in lagu mashquulo inta dhismuhu socdo. Tusaale ahaan, daarta weyn ka dib, waa suurtagal, guryo a, boe wali waa degan yihiin, iyo daar yar ka dib waxaa suurtagal ah in guryo iyo / oh ay degan yihiin.
Tilmaamaha haddii ay dhacdo in cayaar loo baahan yahay in dib loo dhigo
1. Haddii ciyaar aysan dhamaan dhamaadka waqtiga loogu talagalay ciyaarta, garsooraha waa inuu go'aamiyaa in ciyaaryahanka uu haysto waqti uu ku ciyaaro, "shaabadee" tallaabada xigta. Ciyaaryahanku waa inuu ku qoraa talaabadiisa ku socota xaashiyaha warqad qoraal ah oo aan mugdi ku jirin, oo uu ku dhejiyaa xaashiisa iyo xaashiyaha ka soo horjeedka baqshad, wuu xiraa oo kaliya intaas ka dib ayuu joojiyaa saacada, isagoon bilaabin saacada ka soo horjeedka.
Ilaa iyo inta saacaddu aysan istaagin, ciyaaryahanka ayaa xaq u leh inuu beddelo dhaqdhaqaaqiisa sirta ah. Haddii, ka dib markii uu garsooruhu ku wargaliyo in tallaabada xigta ay noqon doonto sirta, ciyaaryahanka ayaa u dhaqaaqaya sabuuradda, waa inuu ku diiwaan geliyaa xaashiisa sida uu u dhaqaaqayo qarsoodiga.
HAA. Garsooruhu wuxuu tixgelin doonaa in ciyaaryahanka leh markiisa inuu ciyaaro, oo doonaya inuu ciyaarta hakiyo kahor dhamaadka kalfadhiga, inuu isticmaalay waqtiga haray oo dhan inuu ku dhammeeyo fadhiga.
2. Bokhshadu waa inay muujisaa:
jagada isla markiiba ka horaysa dhaqaaqa qarsoodiga ah, iyo
waqtiyada ay ciyaartooydu isticmaali jireen, iyo
magaca ciyaaryahanka sameeyay sirta dhaqaaq, iyo
nambarka bixinta qarsoodiga ah iyo
dalabkii kulanka, haddii soo jeedinta la sameeyay ka hor inta aan ciyaarta la laalin, iyo
taariikhda, waqtiga iyo goobta dib loo bilaabi doono ciyaarta.
3. Garqaadku waa inuu hubiyaa sax ahaanta macluumaadka ku jira baqshadda oo uu mas'uul ka yahay xafiditaankiisa.
4.Haddii ciyaaryahanka uu soo jeediyo in la xiro ka dib marka qofka ka soo horjeedaa uu sameeyo dhaqdhaqaaqa qarsoodiga ah, soo jeedinta ayaa sii socon doonta illaa iyo inta ciyaaryahanka uu aqbalayo ama diidaayo, sida ku cad Qodobka 9.1
5Kahor bilaabashada ciyaarta, booska isla markiiba ka hor dhaqaaqa qarsoodiga ah waa in lagu dhejiyaa looxa iyo, marka lagu daro, waqtiga ay isticmaaleen ciyaartoydu markii ciyaarta la joojiyay waa in lagu muujiyaa saacadaha.
6.Haddii ka hor inta aan la bilaabin ciyaarta, ciyaartoydu waxay ku sawiraan heshiis is afgarad ah, ama mid ka mid ah ciyaartoydu uu garsooraha u sheegayo inuu baxayo, ciyaarta ayaa dhammaatay. Baqshadda waa in la furaa oo keliya marka uu joogo laacibka ay tahay inuu ka jawaabo tallaabada sirta ah.
Marka laga reebo kiisaska ku xusan qodobbada 5, 6.9 iyo 9.6, ciyaarta ayaa lumisay ciyaaryahanka diiwaanka dhaqdhaqaaqa qarsoodiga ah
waa madmadow ama
waa been, sida in macnaheeda dhabta ah aan macquul aheyn in la dhiso, ama
Waa sharci darro.
Haddii markii dib loo bilaabayo ciyaarta
ciyaaryahanka si uu uga jawaabo dhaqdhaqaaqa qarsoodiga ah waa la joogaa, baqshadda waa la furay, dhaqaaqa qarsoodiga ah waxaa lagu sameeyay sabuuradda wuxuuna dhigay saacadiisa.
ciyaaryahanka ay tahay inuu ka jawaabo talaabada sirta ah lama hayo, saacadiisa waa inay daaran tahay. Markuu yimaado, laacibku wuxuu joojin karaa saacadiisa wuxuuna wici karaa garsooraha. Gelinta baqshadda ayaa la furay tallaabada qarsoodiga ahna waxaa lagu sameeyaa sabuuradda. Saacadaadu markaa way bilaabmaysaa.
Ciyaaryahankii sameeyay talaabada qarsoodiga ah ma joogo, qofka ka soo horjeedaa wuxuu xaq u leeyahay inuu ka jawaabo warqadiisa, kuna shaabadeeyo xaashiisa baqshad cusub, inuu joojiyo saacadiisa oo uu bilaabo qofka ka soo horjeeda, halkii uu uga jawaabi lahaa qaabka caadiga ah. . Xaaladdan oo kale, baqshadda cusub waa in lagu hayaa xabsiga garsooraha oo la furaa imaatinka ka soo horjeedka.
7. Ciyaaryahanku waa inuu lumiyaa ciyaarta haddii uu yimaado guddiga in ka badan hal saac oo daahitaan ah dib u bilaabista ciyaarta dib loo dhigay (haddii sharciyada tartanka aysan caddeyn ama garsooruhu uusan si kale u go'aansan)
Si kastaba ha noqotee, haddii ciyaaryahanka shaabadeeyey qarsoodiga qarsoodiga ah uu yahay ciyaaryahanka soo daahay, ciyaarta ayaa ku dhammaaneysa haddii kale
ciyaaryahanka maqan waa guuleystaha sababtoo ah xaqiiqda ah inuu si qarsoodi ah ugu dhaqaaqay inuu dilo qofka ka soo horjeeda, ama
Ciyaaryahankii maqnaa ayaa soo saaray barbaraha sababtoo ah dhaqaajintiisii ​​'qaraqday' boqorka ka soo horjeedka, ama boos sida lagu qeexay Qodobka 9.6 wuxuu keenay guddiga, ama
Ciyaaryahankii guddiga joogay ayaa laga badiyay ciyaarta sida ku xusan Qodobka 6.9.
Haddii baqshadda ay ku jirto dhaqdhaqaaqa sirta ah la waayey, ciyaarta waa in dib looga bilaabaa booska waqtiga ganaaxa iyo waqtiyada saacadaha la dejiyo sida waqtiga dib u dhigista. Haddii waqtiga ay ciyaartooydu isticmaaleen aan dib loo celin karin, saacadaha waa in lagu hagaajiyaa go'aanka garsooraha. Ciyaaryahankii shaabadeeyey heshiiska qarsoodiga ah wuxuu fuliyaa tallaabada sheegata inay tahay "sirta" guddiga.
Haddii aysan macquul aheyn in dib loo dhiso booska, ciyaarta waa la joojiyay waana in ciyaar cusub la ciyaaro.
Haddii, markii dib loo bilaabayo ciyaarta, waqtiga la isticmaalay si khaldan loogu muujiyey saacadaha midkood iyo haddii mid ka mid ah ciyaartoygu uu muujiyo ka hor inta uusan dhaqaaqin ugu horreyn, qaladka waa in la saxaa. Haddii khaladka aan la dareemin, ciyaarta waa inay sii socotaa iyada oo aan la sixi karin, ilaa garsooraha mooyee uusan cawaaqibkiisu noqon doono mid aad u daran.
Muddada kulan kasta oo la ganaaxay waxaa xakameyn doona saacadda garsooraha. Waqtiyada bilowga iyo dhamaadka waa in horey loo sii shaaciyo.